कोरोनाको पहिलो एन्टिभाइरल ट्याब्लेट कति प्रभावकारी ? « Nepal Health News नेपालको नं.१ जनस्वास्थ्य पत्रिका
कोरोनाको पहिलो एन्टिभाइरल ट्याब्लेट कति प्रभावकारी ?
२०७८, २१ कार्तिक आईतवार १७:०४ मा प्रकाशित
जनस्वास्थ्य सरोकार, काठमाडौं । बेलायतमा कोरोना संक्रमणको उपचारका लागि विश्वको पहिलो एन्टिभाइरल ट्याब्लेट स्वीकृत भएको छ, आउनुस् यसबारे जानौं ।
कोरोना भाइरसको संक्रमणले विश्वभर त्रास जारी राखेको छ । पहिलेको तुलनामा सक्रमणको दरमा कमी आए पनि यसको खतरा अझै पूर्ण रुपमा टरेको छैन । यस घातक भाइरसविरुद्ध विश्वभर खोप अभियान चलिरहेको छ । कोरोना भाइरसविरुद्ध बनेको स्वीकृत भ्याक्सिन यस घातक संक्रमणविरुद्ध प्रयोग भइरहेको छ ।
विश्वभर कोरोना भाइरसको संक्रमण सुरु भएदेखि नै विश्वभरका वैज्ञानिकहरूले यसको उपचारको खोजी र अनुसन्धान गरिरहेका छन् । पछिल्ला केही महिनामा कोविडको उपचारका लागि धेरै प्रकारका थेरापी र औषधि पत्ता लागेका छन् । हालै बेलायतले कोरोनाको उपचारका लागि विश्वको पहिलो चक्कीलाई स्वीकृत गरेको छ । बेलायतको स्वास्थ्य नियामक निकायले कोरोना भाइरसको उपचारमा विश्वको पहिलो एन्टिभाइरल चक्की (मर्क कोरोनाभाइरस पिल) प्रयोग गर्न स्वीकृति दिएको छ ।
मोल्नुपिराभिरको प्रयोग स्वीकृत
युके मेडिसिन्स एण्ड हेल्थकेयर प्रोडक्ट्स रेगुलेटरीले कोरोनाको उपचारका लागि विश्वको पहिलो एन्टि–कोभिड ट्याब्लेटको प्रयोगलाई स्वीकृति दिएको छ । यो चक्की कोरोनाभाइरस संक्रमित गम्भीर र कम जोखिम भएका बिरामीहरूको उपचारमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । मर्क एण्ड रिजब्याक बायोथेराप्युटिक्सले कोरोनाको पहिलो एन्टिभाइरल ट्याब्लेट मोल्नुपिराभिर बनाएको छ ।
यो औषधि क्याप्सुलको रुपमा बजारमा उपलब्ध हुनेछ । यो औषधि बनाउने कम्पनीले अमेरिकी खाद्य तथा औषधि प्रशासनसँग पनि यस औषधिको प्रभावबारे जानकारी लिन छलफल गर्ने योजना बनाएको दाबी गरेको छ । यो एन्टिभाइरल चक्की ‘लगावरियो’ (मोल्नुपिराभिर) नामबाट बजारमा उपलब्ध हुनेछ ।
संक्रमित व्यक्तिको मृत्युको कम जोखिम
यो औषधि विकास गर्ने कम्पनी मर्क एन्ड रिजब्याक बायोथेराप्युटिक्सले यो एन्टिभाइरल चक्कीको प्रयोगले कोरोना संक्रमित बिरामीको मृत्युको जोखिम ५० प्रतिशतसम्म कम हुने दाबी गरेको छ । यस औषधिको अन्तिम परीक्षणमा, मोलुपिराभिर प्राप्त गर्ने बिरामीहरूमध्ये ७.३ प्रतिशत मात्र अस्पतालमा भर्ना हुन आवश्यक थियो । परीक्षणको अन्तिम नतिजा अनुसार यो औषधिले कोरोना संक्रमितको मृत्युको जोखिम आधा घट्ने कम्पनीले जनाएको छ ।
यूएस फूड एन्ड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशनका पूर्व आयुक्त स्कट गोटलिबले पनि यो औषधिको बारेमा एक समाचार च्यानललाई भने कि मुखको औषधि कोरोना संक्रमण कम गर्न धेरै उपयोगी साबित हुन सक्छ ।
अहिलेसम्म रेमडेसिभिर मात्र प्रयोग
अहिलेसम्म विश्वभर कोरोना भाइरसको संक्रमणको उपचारमा मुखको औषधि मात्र प्रयोग हुँदै आएको छ । रेमडेसिभिरलाई अमेरिकी एफडीएले कोरोनाको उपचारका लागि मात्र स्वीकृत गरेको थियो । रेमडेसिभिर गिलियड साइन्सेसले उत्पादन गरेको हो र बजारमा भ्याक्लुरी नामले बेचिन्छ । रेमडेसिभिर कोरोनाविरुद्ध खासै प्रभावकारी भएको पाइएन । कोरोना भाइरस संक्रमणको दोस्रो लहरमा रेमडेसिभिरको व्यापक प्रयोग भएको थियो । यस औषधिमा गरिएको अध्ययनमा मिश्रित परिणामहरू देखिएका थिए ।
यो एन्टिभाइरल औषधिले कसरी काम गर्छ ?
बेलायतको मेडिसिन्स एण्ड हेल्थकेयर प्रोडक्ट रेगुलेटरी एजेन्सीका अनुसार मोल्नुपिराभिर डिएनए प्रविधि प्रयोग गरेर बनाइएको हो । यो औषधि कोरोनाको नयाँ उत्परिवर्तन हटाउन पनि प्रभावकारी मानिन्छ ।
यस औषधिमा गरिएको अध्ययनका अनुसार यो औषधिको प्रभाव महिला र पुरुष दुवैमा समान रूपमा देखिएको छ र यसको साइड इफेक्ट भने देखिएको छैन ।
यो औषधिको परीक्षणको क्रममा, पुरुष र महिला दुवैलाई गर्भनिरोधक प्रयोग गर्न वा यौन सम्पर्कबाट टाढा रहन निर्देशन दिइएको थियो । यो एन्टिभाइरल चक्की सुरुमा अमेरिकी सरकारले फ्लू थेरापीको रूपमा अध्ययनको लागि लिइएको थियो ।
अहिलेको लागि अन्तिम सुरक्षा खोप
विज्ञहरू र वैज्ञानिकहरू विश्वास गर्छन् कि कोरोनाभाइरस संक्रमण विरुद्धको अन्तिम हतियार भ्याक्सिन हो । सरकारले स्वीकृत गरेको भ्याक्सिनको डोज लिएर यो घातक भाइरसबाट बच्न सकिन्छ । देशमा रेकर्ड स्तरमा मानिसहरूलाई खोपको डोज दिइँदैछ । अहिलेसम्म १८ वर्षभन्दा माथिका व्यक्तिलाई कोरोनाबाट बच्नका लागि खोप दिइँदै आएको छ ।
तर अब चाँडै नै साना बालबालिका (२ देखि १८ वर्ष) लाई पनि कोरोनासँग लड्न खोप लगाइनेछ । (एजेन्सीको सहयोगमा)
जनस्वास्थ्य सरोकार, काठमाडौँ । नेपालमा पछिल्लो २४ घण्टामा २५९ जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। देशभर
जनस्वास्थ्य सरोकार, जेनेभा । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ले हालै अफ्रिकामा देखा परेको भनिएको कोरोनाको
एओर्टिक सर्जरीः चुनौति
जनस्वास्थ्य सरोकार । नेपालमा हरेक चिकित्सकीय विधामा प्रगति भइरहेको हामी सबैमा बिदितै छ । आज
एन्जिओग्राफीमा जब मेरो स्टेन्ट मिसप्लेस भयो…
म इन्टरनल मेडिसिन विशेषज्ञ हुँ । अहिले ७४ वर्षको भएँ । मेरो परिवारमा श्रीमति सविता
साइकल चढेर बच्चा जन्माउन अस्पताल गइन् न्यूजील्यान्डकी सांसद
जनस्वास्थ्य सरोकार । न्यूजील्यान्डकी एक सांसद सुत्केरी बेथा लागेपछि साइकल चढेर अस्पताल पुगेकी छन्। अस्पताल